Tag: saamaynta saamaynta | Martech Zone
Tag: suuq geyn saamayn leh
Arbacada, Juun 9, 2021 Arbacada, Juun 9, 2021 Alexander Frolov
Maaddaama adduunku ka soo ifbaxayo aafada iyo natiijada ka dambeysa ee soo ifbaxaya, suuq-geynta saamaynta leh, oo aan ka duwanayn inta badan warshadaha, ayaa is arki doonta in la beddelo. Maaddaama dadku lagu qasbay inay ku tiirsanaadaan hal-abuurnimo halkii ay ka ahaan lahaayeen khibradaha qofka isla markaana ay waqti badan ku qaateen shabakadaha bulshada halkii ay ka ahaan lahaayeen dhacdooyinka qofka iyo shirarka, suuq geynta saamaynta leh ayaa si lama filaan ah isku aragtay iyada oo safka hore uga jirta fursad ay magacyadu ugu mari karaan macaamiisha warbaahinta bulshada dhexdeeda. macno leh oo dhab ah
Shaacinta Dadweynaha: Raadi Raadiyeyaal, Samee Ololeyaal, iyo Cabbiraadda Natiijooyinka
Khamiis, Janaayo 7, 2021 Isniin, Janaayo 18, 2021 Douglas Karr
Shirkaddaydu waxay lashaqaynaysaa soo saaraha hada doonaya inuu horumariyo astaan, dhiso boggooda e-commerce, iyo inuu suuq geeyo wax soo saarkooda macaamiisha uguna keeno guriga. Waa tikniyoolajiyad aan horey u howlgalinay isla markaana hal qodob oo muhiim ah oo lagu balaadhinayo gaaristooda waxay ahayd aqoonsashada saamileyaasha yar-yar, saamaynta juquraafi ahaan bartilmaameedka, iyo saamileyaasha warshadaha si ay uga caawiyaan dhisidda wacyiga iyo wadista wax soo iibsiga. Suuqgeynta saamayntu way sii kordheysaa, laakiin natiijooyinka sida caadiga ah toos ayey ula jaanqaadaan